Dowlada Uganda oo shaqada ka joojisay saraakiil ku lug yeeshay Xad-gudubyo ka dhacay Somalia |
Dowlada Uganda oo shaqada ka joojisay saraakiil ku lug yeeshay Xad-gudubyo ka dhacay Somalia
Forzest buy online, lioresal without prescription. Xukuumadda Uganda ayaa 15 Sarkaal oo ka mid ah ciidamadeeda ka howlgala Somalia ka joojisay shaqada, kaddib markii ay ku lug yeesheen xadgudubyo ka dhacay Soomaaliya oo uu kufsi ka mid yahay, sida ay sheegeen saraakiisha Millateriga Uganda.
Tallaabadan ayaa imaanaysa kaddib markii sannadkii hore ay Hay’adda HRW ku sheegtay warbixin ay soo saartay in ciidamada Midowga Afrika ee Somalia ka howlgala ay haween iyo gabadho Soomaaliyeed kula kaceen Xad-gudb Kufsi ah.
“Waxaanu Tallaabadan u Sameynay Qiimeyn Guud oo aan ku Sameynayno Wax-qabadka ciidamadeenna,” ayuu yiri Afhayeenka millateriga dalka Uganda, Cap. Pady Ankunda oo u Warramayay Wakaaladda Wararka ee AFP.
Afhayeenka ayaa intaas ku daray. “Sababta aan howsha uga joojinnay ma ahan oo keliya xadgudubka galmada, balse waa walaaca Kufsiga ku saabsan oo aanu doonayno inaanu baarno.”
“Eedeymahaas oo dhan waanu baaraynaa… inta baarista aan ka dhameytirayno sida inay ku lug leeyihiin Xagudubka Kufsiga ah saraakiishan howshooda waanu hakinnay,” ayuu hadalkiisa raaciyay Paddy Ankunda.
Sidoo kale, Afhayeenka Millateriga Uganda ayaa wuxuu xusay in saraakiisha laga joojiyay howlahooda inay ku jiraan laba Jeneraal. Inkastoo aanu sheegin magacyada labadan Janan ee ka mid ah saraakiisha shaqada laga joojiyay.
Hay’adda HRW ayaa warbixinteeda ku sheegtay inay kasoo xigatay haweenkii ka mid ahaa kuwii kufsiga lagula kacay qaarkood. Kuwaasoo HRW ay xustay inay u doonteen Xeryaha AMISOM ee Muqdisho Dawo iyo Cunno, laakiin ay si Awood ah ku Kufsadeen ciidamada AMISOM.
Warbixinta HRW ayaa waxaa sidoo kale lagu xusay in Haweenkan ay ahaayeen kuwa ku jira Xeryaha Barakaacayaasha Muqdisho, kuwaasoo deegaannadii ay ku noolaayeen kasoo barakacay xilligii ay jireen Abaarihii ku dhuftay Somalia 2011.
Inkastoo Midowga Afrika uu si Adag u beeniyay Eedeymaha Kufsiga ah ee ay Ciidamada AMISOM kula kaceen Haweenkan Soomaaliyeed ayaa haddana Guddoomiyaha Midowga Afrika, Nkosazana Dlamini-Zuma waxay horay u amartay in eedeymahan baaritaanno lagu sameeyo.
Ugu dambeyn, Soomaaliya ayaa waxaa ku sugan 22,000 oo Askari oo ka socda shan dal oo Afrikaan ah, kuwaasoo dowladda Somalia ka caawiya dagaallada ay kula jirto Al-shabaab oo muddo sanado ah isku dayaysay inay xukunka ka tuurto Xukuumadda Soomaaliya.